by MM Book City · Published February 21, 2019
၁။ တာဝတိံသာနတ်ပြည် တစ်ထောင်သော နတ်မင်းတို့၏ မိဖုရားအဖြစ်ကိုရခြင်း။ ၂။ တစ်ထောင်သော စကြာမင်းတို့၏ မိဖုရားအဖြစ်ကို ရခြင်း။ ၃။ မရေတွက်နိုင်သော ပဒေသရာဇ်မင်းအဖြစ်ကို ရခြင်း။ ၄။ ကြာညိုပန်းအဆင်းနှင့် တူသော အဆင်းရှိသည် ဖြစ်၍ အလွန် အဆင်း လှခြင်း။ ၅။ ကိုယ်အင်္ဂါ အားလုံး နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ လွန်စွာ ရှုချင်စဖွယ် ရှိခြင်း။ ၆။ မြတ်သော အမျိုး၌...
by MM Book City · Published February 20, 2019
(လယ်တွင်းသားစောချစ် ) လှပခမ်းနားသော ဖိတ်စာတစ်စောင်..ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ဦး နှင့် ဒေါက်တာသီတာမိုး ” ဖေဖေ… ဒီဖိတ်စာ သမီးကိုပေးနော်… သိမ်းထားချင်လို့” ရှစ်တန်းကျောင်းသူ သမီးငယ်က ဖိတ်စာကိုအိတ်နဲ့တကွ အပိုင်ယူလိုက်သည်။” အဲ့ဒီ ဖိတ်စာတစ်စောင်ကို နှစ်ရာကျတယ်တဲ့…..” ဒေါ်မြအေးက ဈေးသည်ပီပီ ကျောက်ဆည်ဈေးထဲမှာ သတင်းကြားခဲ့ပြီ။” ဆန်းသစ်လွင် ရုပ်ရှင်ရုံမှာ မင်္ဂလာဆောင်မှာတဲ့ မေမေရ၊ ဖိတ်စာထဲမှာပါတယ်” ” ဟုတ်တယ်…ရန်ကုန်ပုံစံအတိုင်းကျွေးမှာတဲ့။ဖိတ်တာတောင်ခွဲတမ်းနဲ့၊တစ်ယောက်ကို ကျွေးမယ့်တန်ဖိုးကပဲ ဘယ်နှထောင်ဖိုးဆိုလားး သတိုးသားက်က တစ်ရာ့ငါးဆယ်။သတိုးသမီးဖက်ကတစ်ရာ့ငါးဆယ်။တစ်ကယ့်မျက်နှာကြီးတွေချည်းရွေးဖိတ်တာတဲ့…..။အိမ်ရှေ့တိုက်ကတောင် သူတို့နဲ့ခင်လျက်သားနဲ့မဖိတ်လို့ စိတ်ဆိုးနေတယ်။ ဒေါ်မြအေးသတင်းကပိုစုံတယ်...
by MM Book City · Published February 13, 2019
by MM Book City · Published February 9, 2019
ပိုက်ဆံလေးနည်းနည်းရှိလာတော့ တိုက်နေကြဆပ်ပြာတောင် ယားသလိုခံစားရတယ် သုံးနေကြ shampoo တွေဟာ quality သိပ်မကောင်းတော့ဘူးလို့ တွေးမိတယ်…. စားနေကြ ၅၀တန် ဝက်သားဒုတ်ထိုးတောင် နံတယ်ထင်ပြီး ခုတွဲနေတဲ့ရည်းစားတောင် ရွံစရာကြီးလို့ထင်မိတာ.. အပေါစားတွေသုံးခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှက်မိပြီး သူဌေးတွေနဲ့ပဲရွေးပေါင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်.. ဖူးနေကြဘုရားတောင် သိပ်တန်ခိုးမကြီးတော့သလိုတွေးမိပြီး နိုင်ငံခြားကဘုရားပဲဖူးတော့ မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်… ၂၀၀ထဲနဲ့ဆူးလေရောက်နိုင်တာကို အံ့အားတွေသင့်နေပြီး ညစာအတွက်ဆိုင်မ ထပ်အောင်ရွေးရတာကို ဒုက္ခတစ်ခုလိုမြင်မိတယ်… ရုပ်ရှင်ကိုအပေါ်ထပ်ကကြည့်မှ ပိုကြည်တယ်လို့ခံယူပြီး လမ်းဘေးစာတွေကို နှာခေါင်းရှုံ့ပြီး ခပ်ဝေးဝေးက...
by MM Book City · Published February 4, 2019
by MM Book City · Published February 2, 2019
“Choose your love. Love your choice.”– Thomas S. Monson –မင်းအချစ်ကို ရွေးပါ။ မင်းရွေးချယ်မှုကို ချစ်ပါ…။– Thomas S. Monson – “It’s better to burn out than to fade away.”– Neil Young –မှိန်ဖျော့ပျောက်ကွယ်ရတာထက် လောင်ကျွမ်းကုန်ဆုံးရတာက ပိုကောင်းပါတယ်…။– Neil Young –...